The Institute for the Study and Treatment of Pain - MYANMAR BURMESE မြန်မာမြန်မာ IMS ကဘာလဲ? GunnIMS: အသားစိတ်ကြွဆေး
MYANMAR BURMESE မြန်မာမြန်မာ IMS ကဘာလဲ? GunnIMS: အသားစိတ်ကြွဆေး
IMS ကဘာလဲ? GunnIMS: အသားစိတ်ကြွဆေး
MYANMAR BURMESE မြန်မာမြန်မာဘာသာပြန်ထားသောကို LANGUAGE
ဤစာမျက်နှာကိုအမြန် Google ကအများပြည်သူတို့အတွက်အရေးကြီးသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသတင်းအချက်အလက်များဘာသာပြန်ဆိုမှာထုတ်လုပ်ပြီးကွန်ပျူတာအားထုတ်မှု Translate ကို အသုံးပြု. ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သင်နှစ်သက်တဲ့ဘာသာစကားမှသတင်းအချက်အလက်များဘာသာပြန်ဆိုဆိုဝက်ဘ်စာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်မှာ box ကိုချတစ်စက်ကိုသုံးပါ။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကအကူအညီများကိုတောင်းခံရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ မည်သည့်သတ်ပုံအမှားများကိုခွင့်လွတ်ပေးပါ, စစ်မှန်သောလူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းဘာသာပြန်များအများကြီးတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ ; )
ဂွန် IMS ကဘာလဲ? ဂွန်အသားစိတ်ကြွဆေး
'' ကိုက်အခဲပျောက်ဆေး '' နှင့်အခြား analgesic ဆေးပြားကိုသာနာကျင်မှု mask (မကြာခဏညံ့ဖျင်း) နှင့်အဆိပ်မြှင့်တင်ရန်, ပြဿနာဆိုင်တွေမှာစဉ် Supersensitivity နှင့်ကြွက်သားအတိုကောက် 'ကွာဖြတ်' 'အပေါ် operated နှင့်မရနိုင်ပါ။ Neuropathy သာစွမ်းအင်တစ်ခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ input ကိုတုံ့ပြန်မှု။
အသားစိတ်ကြွဆေး (IMS) myofascial နာကျင်မှု Syndrome (ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းမရှိသိသာနိမိတ်လက္ခဏာလည်းမရှိသည့်အခါ musculoskeletal စနစ်ပေါ်ပေါက်ကြောင်းနာတာရှည်နာကျင်မှုအခြေအနေများ) ၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုများအတွက်စုစုပေါင်းစနစ်ဖြစ်သည်။ IMS အနောက်တိုင်းဆေးပညာသိပ္ပံအတွက် grounded နှင့်ယခုလယ်ပြင်၌များစွာသောကျွမ်းကျင်သူများကထောက်ခံထားတဲ့နာကျင်မှုက၎င်း၏ radiculopathic မော်ဒယ်တစ်ဦးအစိုင်အခဲအခြေခံအုတ်မြစ်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူစွန့်ပစ်ခြင်းမှာထိရောက်မှုပုံစံများနှင့်စိတ်ပျက်ပြီးနောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းခေါင်းမာရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးရှိရာ 70 ရဲ့ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ၏အလုပ်သမားရဲ့လျော်ကြေးဘုတ်အဖွဲ့မှာဆေးသမားစဉ်ဒေါက်တာဂွန်ကတီထွင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကြွက်သားတစ်သျှူးအတွင်းနက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်ဖို့ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းရရှိနိုင်ပါသည်အပါးလွှာဆုံးသုံးကိရိယာကြောင့်အပ်စိုက်ကုထုံးတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်အသုံးချသောကုသမှု, အထူးသကန်ထရိုက်နှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲကနေရှည်ဖြစ်လာကြပြီဒဏ်ရာရကြွက်သားပစ်မှတ်ထား။
IMS neuropathic နာကျင်မှု၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရိပ်လက္ခဏာကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားနေတဲ့အရည်အချင်း Practitioner အားဖြင့်လူနာတစ်ဦးနှံ့နှံ့စပ်စပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုနေရသည်။ အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်ထို့ကွောငျ့, စျေးကြီး X-ray မှမမြင်ရတဲ့, MRI စမ်းသပ်မှု, အရိုးများနှင့် CT scan ဆန့်ကျင်အဖြစ်နာတာရှည်နာကျင်မှုအာရုံကြောမကြာခဏပင်ဖြစ်သည်ကတည်းကဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ဤနိမိတ်လက္ခဏာကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ပျက်ကွက်အနေနဲ့တိရောဂါနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအဘို့, အရှင်, ဆင်းရဲသား Starting Point သို့ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ကုသမှုမဆိုပစ္စည်းဥစ္စာထိုးသွင်းစရာမလိုဘဲကိုယ်ခန္ဓာ၏ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသများ၏ခြောက်သွေ့တဲ့တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ပါဝငျသညျ။ အဆိုပါဆေးထိုးအပ်က်ဘ်ဆိုက်များ taut, နူးညံ့သောကြွက်သားခညျြအနှောများ၏ငလျင်ဗဟိုချက်မှာမှာနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကအာရုံကြောအမြစ်စိတ်ဆိုးနှင့် supersensitive ဖြစ်လာကြပေမည်ရှိရာကျောရိုးအနီးရှိနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်ကြွက်သား၏ထိုးဖောက်မှုနာကျင်မှု့မရှိတဲ့ဖြစ်၏ သို့သော်တစ်ဦးကိုတိုစေ, supersensitive ကြွက်သား '' ဆုပ်ကိုင် '' တစ်ဦးကျဉ်းကျုတ်အာရုံအဖွစျဖျောပွနိုငျသောအရာကိုအတွက်ဆေးထိုးအပ်မည်။ အဆိုပါရလဒ်သုံးလှနျးတငျဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်း, ထိုကြွက်သားအတွက်လမ်းပိုင်းအဲဒီ receptor တစ်တုံ့ပြန်မှုအပန်းဖြေ (ကျရှညျ) ကိုထုတ်လုပ်နှိုးဆွနေသည်။ နှစ်ယောက်အပ်သည်လည်းသဘာဝသည်အနာပျောက်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ယင်းဧရိယာကိုသွေးဆွဲယူတဲ့သေးငယ်တဲ့ဒဏ်ရာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သုံး, ကုသမှုပုံမှန်ပြန်အာရုံကြော function ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါကြွက်သားအတွက်လျှပ်စစ်အလားအလာဖန်တီးပေးပါတယ်။ IMS အတွက်အသုံးပြုတဲ့ဆေးထိုးအပ်, ကြွက်သားဗိုင်းလိပ်တံလှုံ့ဆော်အသုံးပြုပုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Neuropathic ကြွက်သားနာကျင်မှု၏ရောဂါများအတွက်တိကျသောနှင့်ထူးခြားသော tool ကိုဖြစ်လာသည်။
ကုသမှု၏ရည်မှန်းချက်အပေါ်ကိုတိုက်တွန်းနှင့်အာရုံကြောဆိုးကျိုးဖြစ်စေသည်ထားတဲ့ကြွက်သားအတိုကောက်, လွှတ်ပေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Supersensitive ဒေသများ desensitized ခံရနိုင်ပြီး, တာရှည်ကြွက်သားများမြဲဆွဲဖြန့်ချိနိုင်ပါသည်။ IMS အားဖြင့်ကြွက်သားဆွဲထဲကနေစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုဖြစ်စေတဲ့, contracture အောက်တွင်ရှည်ကြွက်သားလွှတ်မှုအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ IMS, အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်နာကျင်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောနောက်ခံ neuropathic ခွအေနအေဆကျဆံတယျ။ နိုင်ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာတောင်မှအမြစ်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူနာတာရှည်နောက်ကျောနာကျင်မှုများအတွက်, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များ၏ amelioration ခြင်းဖြင့်သက်သေပြအဖြစ်, IMS, ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုနှုန်းမှာရှိပါတယ်။
IMS အပ်စိုက်ကုထုံးတချို့နည်းလမ်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျက်ရှိ၏ သို့သော်အရေးကြီးသောကွဲပြားမှုများစွာရှိပါတယ်။ IMS ခန္ဓာဗေဒအတွက်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့တစ် Practitioner ကဆေးစစ်ခြင်းနှင့်ရောဂါလိုအပ်ပါတယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ရည်ရွယ်ချက်သက်ရောက်မှုများသောအားဖြင့်ချက်ချင်းကြုံတွေ့နေကြသည်နေစဉ်, တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် INSERT, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရိပ်လက္ခဏာအားဖြင့်ညွှန်ပြခြင်းနှင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထား non-သိပ္ပံနည်းကျဒီဂရီမျဉ်းနှင့်အညီကြသည်မဟုတ်။
KEYWORDS: အသားဆွ, အသား, IMS, cgims, ဂွန် IMS ခြောက်သွေ့တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်, အပ်စိုက်ကုထုံး, ခလုတ်အမှတ်, myofascial နာကျင်မှု
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ DIRECTORY - CGIMS Practitioner FIND
IMS k bharlell? GunnIMS:asarrhcatekyawsayy
myanmar myanmarbharsarpyan htarrsawko LANGUAGE
kyaayyjuupyupyee mhaatsarr htarrpar:
ihcarmyetnharkoaamyan Google k aamyarrpyisuu thoetaatwat aarayykyeesaw kyannmarrayyhcaungshoutmhu satainnaahkyetaalaatmyarr bharsarpyanso mhar htotelotepyee kwanpyauutaraarrhtotemhu Translate ko aasonepyu. bharsarpyan htarrsaw hkaetar hpyitpartaal . sainnhaitsaattae bharsarhcakarr mha satainnaahkyetaalaatmyarr bharsarpyanso so waatbh hcarmyetnhar rae htiutpine nyarhpaatmhar box ko hkya taithcaat ko sone par . sainsai mai sany mayyhkwannmyarr shipark aakuuaanyemyarr ko taungghkan raan kyawantawthoet ko saatswal par . mai saeet saatpone aamharmyarr ko hkwin lwat payypar, hcaitmhaansaw lhu hcaytanarwaanhtam bharsarpyanmyarr aamyarrkyee taanhpoehtarr kyapartaal . ; )
gwan IMS k bharlell? gwanasarrhcatekyawsayy
'' kite aahkellpyawwatsayy '' nhaintaahkyarr analgesic sayypyarr ko sarnarkyinmhu mask ( makyaarhkan nyan hpyinn) nhaint aasiut myaha in tainraan, pyaဿnar sinetwaymharhcain Supersensitivity nhaint kyawatsarraatokout ' kwar hpyat' 'aapaw operated nhaint maraninepar . Neuropathy sar hcwmaain taithkurotepinesinerar input ko tonepyanmhu .
a sarrhcatekyawsayy (IMS) myofascial narkyinmhu Syndrome ( danrar shoetmahote raung ram hkyinn mashi sisar nimate lakhkanar laee mashi sanyaahkar musculoskeletal hcanait pawpout kyaungg nartarshi narkyinmhu aahkyayaanaymyarr) eat rawgar nhaint kusamhu myarraatwat hcuhcupaungg hcanait hpyitsai . IMS aanouttine sayypanyar sippanaatwat grounded nhaint yahku laal pyin myarrhcwarsaw kyawmkyinsuumyarrk htouthkan htarrtae narkyinmhu k၎inneat radiculopathic mawdaal tait uahcine aahkell aahkyayhkan aotemyit shipyee hpyitpartaal . darhar suu hcw an paithkyinn mhar htiroutmhu ponehcanmyarr nhaint hcatepyet pyeenout htuuhtuusaannsaann hkaungg mar rawgar hpyitpwarrmhu eat kyeemarrsaw aarayaatwat aarr hconehcamhcaitsayyshirar 70 rae byaitish kolanbheyar eat aalotesamarr rae lyawkyay bhoteaahpwal mhar sayy samarr hcain douttar gwan k tehtwin hkaesai . suuthoet kyawatsarr tait shuu aatwin naat shine hcwar htoehpout hphoet dejine hpyitkyaungg rashinineparsai aaparrlwharsone sone kiriyar kyawwng aaut hcite kuhtone taithkarsone sayy htoe aaut aasonehkya saw kusamhu, aahtuu s kaanhtarite nhaint dukhk sainnrell k nay shi hpyitlar kya pye danrarr kyawatsarr paitmhaathtarr .
IMS neuropathic narkyinmhu eat rotepinesinerarariut lakhkanar ko aasiaamhaatmapyu hphoet lae kyint sainkyarr nay taeaaraiaahkyinn Practitioner aarr hpyint luunar tait u nhaan nhaan hcauthcaut rotepinesinerar hcarmayypwal aapaw aakyeeaakyaal mhaehko nayrasai . aahkyayhkan aasouta u myarr nhaint hthoet kwayarngya, hcyaayykyee X-ray mha mamyinratae, MRI hcamsautmhu, aaroe myarrnhaint CT scan s an kyin aahpyit nartarshi narkyinmhu aarronekyaww makyaarhkan painhpyitsai kataeek darhar rotepinesinerar hcarmayypwal mashimahpyit parpell . i nimate lakhkanar ko aasiaamhaatmapyu hphoet pyetkwat aanaynae ti rawgar nhaint rotepinesinerar kuhtoneabhhoet, aashin, sainnrellsarr Starting Point shoet hpyitpaw par lain maal .
kusamhu m so pahchcaee uhchcar htoe swin hcarar malobhell kohkandhar eat bhayy dan saint days myarreat hkyawwatswae tae taithkarsone sayy htoe aaut parwangya s nyya . aasopar sayy htoe aaut at bh sitemyarr taut, nuunyan saw kyawatsarr hk nyyayaanhaaw myarreat ngalyin baho hkyetmhar mhar ninepartaal, darmhamahote suuthoet k aarronekyaww aamyit hcatesoenhaint supersensitive hpyitlar kya pay mai shirar kyawwroe aaneeshi nineparsai . ponemhaan kyawatsarr eat htoehpoutmhu narkyin mhu mashitaehpyiteat shoetsaw tait u ko to hcay, supersensitive kyawatsarr '' sotekine '' tait u kyain kyaote aarrone aahpwhcya hpyaww pw nongya saw aararko aatwat sayy htoe aaut mai . aasopar ralad sone lhanya tangya hpyitpartaal . t u taee, hto kyawatsarr aatwat lampineaellde receptor tait tonepyanmhuaapaannhpyay ( kya shnyya) ko htotelote nhaoe sw naysai . nhaityout aaut sailaee sabharw sai aanar pyawwat hcaysaw lotengaann hcain ko hcatain yainn eriyar ko sway swalyuu tae sayy ngaal tae danrar ko hpyitpaw hcaysai . sone, kusamhu ponemhaan pyanaarronekyaww function ko hpyithcay hkyinn nghaar kyawatsarr aatwat shuthcait aalarraalar hpaantee payypartaal . IMS aatwat aasonepyu tae sayy htoe aaut, kyawatsarr bine liut tan lhuansaw aasonepyuponemashimahpyitloaauttae Neuropathic kyawatsarr narkyinmhu eat rawgarmyarr aatwat ti kyasaw nhainthtuuhkyarrsaw tool ko hpyitlarsai .
kusamhu eat raimhaannhkyet aapaw ko titetwann nhaint aarronekyaww soekyoe hpyithcaysai htarrtae kyawatsarr aatokout, lwhaatpayyraan raan hpyitparsai . Supersensitive daysamyarr desensitized hkanr ninepyee, tar shi kyawatsarr myarr myaell swal hpya an hkyai nineparsai . IMS aarr hpyang kyawatsarr swal htellk nay hcaat pinesinerar narkyinmhu hpyithcaytae, contracture aouttwin shi kyawatsarr lwhaat mhuaatwat aalwan htiroutsaw hpyitpartaal . IMS, aakyoesaatroutmhu aatwat narkyinmhu hpyitpaw hcaysai sawnouthkan neuropathic hkw aay n aay sakyasan t yya . nine hpyawhpyay taeaahkar mhar taungmha aamyit sinebhotemyarr nhaint aatuu nartarshi nout kyaww narkyinmhu myarraatwat, rawgar lakhkanar nhaint sinebhotemyarreat amelioration hkyinn hpyint saatsay pya aahpyit, IMS, htuuhkyarrtae aaungmyinmhu nhuann mhar shipartaal .
IMS aaut hcite kuhtone tahkyahoet naeelamtway nae nhaine yhain lyetshieat shoetsaw aarayykyeesaw kwalpyarrmhu myarrhcwar shipartaal . IMS hkandharbayd aatwat taat kyawm narrlaitaetait Practitioner k sayyhcait hkyinn nhaint rawgar loaautpartaal puggal dit nhaint rairwalhkyet saatroutmhu myarrsaw aarr hpyint hkyethkyinn kyuantwae naykyasai nayhcain, taithkarsone sayy htoeaaut INSERT, rotepinesinerarariut lakhkanar aarr hpyint nywhaan pya hkyinn nhaint kyaotainsaatmhaathtarr non- sippannaeekya degare myain nhanganye kyasai mahote .
KEYWORDS:asarr sw,asarr, IMS, cgims, gwan IMS hkyawwatswae taithkarsone sayy htoe aaut, aaut hcite kuhtone, hkalote aamhaat, myofascial narkyinmhu
narkyinmhu eat laelarmhu nhaint kusamhu myarraatwat aain hc te kyau (iSTOP)
baan kuu barr, bhehcekanaydar
aapyipyisinerar DIRECTORY - CGIMS Practitioner FIND